विर्तामोडमा वातावरण प्रदूषण - झुल्केघाम
विर्तामोडमा वातावरण प्रदूषण
May 30, 2020 12:30 PM
झापा, जेठ १७ । “हरित वन हाम्रो सम्पत्ती हो”। ओह! मलाई माफ गर्नुहोस्। मैले गलत भनेको थिएँ, वा यो भन्नु राम्रो हुन्छ कि “धुँवा र धूलो हाम्रो सम्पत्ती हो ?” एक पटक जब हामी हाम्रो घरबाट बाहिर निस्कन्छौं, प्रदूषणको फोहोर दृश्य देखिन थाल्छ। सडक छेउमा, मैदानमा, हामी जताततै भन्नु पर्ने राम्रो र फरक चकलेटहरूको खोल वरिपरि चारै तिर देख्दछौं।सबैभन्दा सुन्दर दृश्य देखा पर्न थाल्छ जब हामी नदी र साना नहरहरूको नजिक पुग्छौं, केही मात्रामा फोहोर प्रदूषित पानीको कालो ढिस्कोमा तैरिरहेको भेट्टाइन्छ केहीले आधा डुबाइको आनन्द उठाउँछन्।र धेरै अवस्था नेपालको एक विकसित (तथाकथित) शहरहरू मध्ये एक हो, बिर्तामोड। मलाई लाग्छ कि यो सक्रिय रूपमा नेपालको दोस्रो प्रदूषित शहरको पुरस्कार प्राप्त गर्नमा संलग्न छ।
हुनसक्छ “मेयर” र अन्य अधिकारीहरू पनि पुरस्कार लिन धेरै चिन्तित छन्।तपाईं यसलाई केवल हास्यको विषयको रूपमा सोच्न सक्नुहुन्छ तर वास्तवमा यो हाम्रो समाज / शहरको गम्भीर समस्या हो। यदि प्रदूषणको यो चरण उही अनुपातमा अगाडि बढ्छ भने, हाम्रो शहरमा कोही व्यक्ति केही वर्षमा स्वस्थ हुनेछैन। व्यक्ति बिरामी हुन्छन्, अस्पतालमा जान्छन्, उपचार लिन्छन् तर कहिल्यै रोगको कारणको बारेमा चिन्ता लिदैनन्। हाम्रो शहरका अस्पतालहरूमा रिपोर्ट गरिएको धेरैजसो रोग महामारी हो र प्रदूषणले गर्दा आएको हो।एक वर्ष अघि मात्र हाम्रो शहरका अस्पतालहरूमा “डेन्गुए” र “मालारिया” को २०० भन्दा बढी कारणहरू रिपोर्ट गरिएको थियो र of ७५ % बिरामीहरू आफ्नै शहरका थिए। यसको मूल कारण प्रदूषण हो तर कसैले यसको वास्ता गर्दैन। अधिक जसो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस प्रमुख हुन्छन्।
मानिसहरू बिरामी र उपचार गर्न सजिलो भयो बरु रोगको रोकथाम गर्नका लागि जुन स्थायी समाधान हो।खैर मान्छेले आफ्नो घर सफा गर्छन् तर उनीहरू घरबाट फोहोरलाई लापरवाह बाहिर फ्याँकछन्। समाजलाई प्रदूषित गर्ने अधिकार कसले दियो? उनीहरूले सोच्दछन् कि उनीहरू आफ्नो घर सफा गरेर मात्र सुरक्षित छन् तर मलाई उनीहरूलाई सम्झाउनुहोस् कि तिनीहरूले आफ्नो समय घरमा भन्दा बाहिर बिताउँछन्। थप रूपमा तिनीहरू उहि हावा सास फेर्छन्, समान पानी पिउँदछन्, चाहे तिनीहरू बाहिरका हुन् वा भित्र। मानिसहरू जहाँ जहाँ बस्छन् उनीहरूलाई फोहोर बनाउँदछ, मानिसहरूलाई भन्दा सुँगुर भन्नु उत्तम हो।
यमन भुर्तेलको लेख
प्रभावको सार यो छ कि यसले प्रदुषणले हामीलाई मात्र असर गरिरहेको छैन, यसले वास्तवमा धेरै ग्लोबल वार्मिंग, खडेरी, अनौंठो वर्षाको फलफूलको अनौंठो पकड आदिलाई मद्दत पुर्या्इरहेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो शहर भद्दा र अपवित्र देखिन्छ र अर्कोतर्फ यसले स्थानीय रूपमा स्थानीय साथै विश्वव्यापी प्रभावहरु।अब, यो धेरै नै छ र त्यहाँ पर्खने समय छैन। यो सोच्न धेरै ढिलो भयो, हामीले तत्काल कार्य गर्नु पर्छ। यस लेखको माध्यमबाट म हाम्रो शहरको उच्च पदका व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र तथाकथित राम्रो चिन्तकहरूलाई बढ्दो समस्याहरूका लागि।
तर यो भन्नुको मतलब हाम्रो मतलब यो होइन कि तिनीहरूले सबै सफा गर्नुपर्छ, तर हामीलाई उनीहरूको समर्थन चाहिन्छ। तिनीहरू हाम्रो शहर सफाई अभियानको लागि हामीसँग सामेल हुनु आवश्यक छ। हामी सबै मिलि एउटा नारा लगाउ ,धुवा, धुलो लगायतका प्रदुषण हाम्रो वरिपरि बाटै भगाउँ ।
अर्जुनधारामा नेवि संघको पहलमा रोग प्रतिरोधात्मक औषधि वितरण
डिल्लिराज माविको ८ कोठे भवनको शिलान्यास
आज थप ३८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सर्लाहीका नेकपा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण
मेची अस्पताल भद्रपुरमा पिसिआर परीक्षण शुरु
विराट र कोसी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बन्द भएको सेवा सुरु
नेपालका नयाँ तीन आन्तरिक विमानस्थललाई आइकाओबाट मान्यता
देशका १५ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा ; गृह मन्त्रालय
४ लाख रुपैयाँ राशी भएको मदन पुरस्कारको लागि ७ कृति छनोटमा
म्यानचेस्टर युनाइटेडको आधिकारिक होम जर्सी सार्वजनिक